Publié parfilazantsaramada	 août 17, 2012 Laisser un commentaire sur
Avonavona, Fanetren-tena !
Toetra misy eo amin’ny olombelona ireo ! Ny zava misy anefa araka ny Soratra Masina dia « tsy misy marina na dia iray akory aza »Romana 3 :9 koa raha araka io Teny io dia tsy misy tafiditra ny lanitra ny olona rehetra! Rehetra!
Soa ihany fa nisy vaha olona nomen’Andriamanitra! Ny fiaikena ny fahotana eo anatrehan’Andriamanitra dia mahatonga Azy hamela ny fahadisan’ny olona .
“Raha hoy isika tsy manana ota isika, dia mamita-tena, ary ny marina tsy ato anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika: Tsy nanota isika, dia mampandainga Azy, ary ny teniny tsy ato anatintsika.” I Jaona1: 9
Raha hoy isika , tsy nanota isika dia mampandainga Azy! Tsy misy marina na dia iray akory aza! Mifanaraka ireo teny roa ireo. Tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an’Andriamanitra! Raha araka ny Soratra Masina dia fahafatesana no tambin’ny ota . Samy maty avokoa ny olona rehetra eo anatrehan’Andriamanitra. Raha hoy hianao hoe: tsy nanota aho, dia mampandainga an’Andriamanitra hianao! Nanota hianao, nanota aho, nanota isika rehetra, efa nahazo antsika rehetra ny ota.
Iray ihany no olona tsy nanota: Jesosy Kristy, Ilay Zanak’ondrin’Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao! Teo amin’ny Testamenta Taloha dia efa fantatra fa mitondra fahatezerana ho an’Andriamanitra ny fahotana ary nanao fanatitra noho ny ota ny mpivavaka tamin’I Jehovah Tompon’ny maro., ary nofidiana ny zanak’ondry tsy misy kilema Taty aoriana anefa dia Andriamanitra mihitsy no nanolotra Ilay Zanak’ondry tsy misy kilema mba ho fanatitra noho ny ota, dia I Jesosy tsy nanota, novonoina teo amin’ny Hazofijaliana, natsaka ny ràny ho famelàna ny otan’izay manaiky izany fanatitra izany.
Ny REHETRA no mila io fanatitra io satria ny rehetra no efa nanota! Tsy vonoina intsony ny fanatitra satria efa vita Indray mandeha ihany izany.Ny ilaina amintsika dia ny MIAIKY ny fahotana.
Ny FIAVONAVONANA no mahatonga ny olona tsy hiaiky ny fahotana vita. Io no asan’I Satana; ny asan’I Satana dia mahatonga ny olona hanamarinantena, ka tsy hiaiky ny fahotana.
Ny asan’I Satana dia ny mamboly avonavona ao ampon’ny olona ka manamavo ny asan’Andriamanitra, Manamavo ny Faharimpon’Andriamanitra izay te hamela heloka.
Ny mason’Andriamanitra dia manadrina ny mpiavonavona.
Ny FANAHY MASINA dia mampiaiky ny olona ny fahotana.Jaona 16:8 Rehefa tsy manaiky ny asan’I Satana izay mitondra fanamarinantena sy avonavona, ny olona iray dia manaiky kosa hiasan’ny Fanahy Masina, manaiky Ho resilahatra ny Fitiavana izay nitivan’ny Tompo Jesosy azy, manaiky ho resilahatra fa ho fanamarinana azy sy ho fanadiovana azy no nandatsahan’i Jesosy Kristy ny Ràny .
Na handatsaka ranomaso eran’ny koveta aza ny olona, rehefa tsy ny Fanahy Masina no avela hiasa hampibebaka azy, dia verimaina izany.
Ny Fanahy Masina no mampangorakoraka ny fon’ny olona, fa ny fanahin’I Satana no mampiavonavona azy. Sahala amin’ny ohatra ao amin’I Testamenta Taloha: rehefa nialan’ny Tenin’Andriamanitra nenina I Farao ka tsy nanaiky dia nohamafisina ny fony. Aoka tsy han,aiky hoahajambain’I Satana ny fanahin-tsika ka tsy hanaiky ny Fanahy Masina izay mitarika antsika amin’ny fiverenana amin’Andriamanitra Marina.
Izay MANETRY TENA no asandratra:
Ny manetry tena no afaka hiaiky ny fahadisoany eo amin’Andriamanitra. Ny manetry tena no tsy mitsara ny hafa ka hanambany ny Faharimpon’AndriaManitra.
“Izay rehetra manandra-tena no haetry, ary izay manetry tena no asandratra” Lioka 18:14
Ny Fahamarinana amin’izao Teny izao ary dia ny Fitiavan’Andriamanitra Antsika, satria tsy tiany ho very isika, tsy tiany ho faty amin’ny helotsika isika.
Dia ny mbola azo atao dia aoka isika handray ny famelana hy helotsika. Aoka isika hanalavitra ny avonavona ka hanetri-tena sy hiaiky ny fahotantsika dia hanadratra antsika ho zanany Izy! Ary omeny ny fiainana mandrakizay!
Publié parfilazantsaramada août 17, 2012 Publié dansUncategorized
Publié par filazantsaramada
Feon'ny Filazantsara	Voir plus d’articles
Ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra!
<!–Début code CounterStats.fr –>
https://www.counterstats.fr/compteur/compteur.jscounter(« wlsgsqmd », »FFFFFF », »FFAA33″);
<!– Fin compteur CounterStats.fr –>
filazantsaramada, Propulsé par WordPress.com.